Sababaha 4 nusqaamood oo Reer Awdalow mushrax Maxamed cali rajo laga sugaayi goof u tahay iyo 4 kale oo siyaad bare iyo ciro ba ku doorteen isaga!! Dr.Khadar-Libaaxley. | Awdalmedia.com
Sababaha 4 nusqaamood oo Reer Awdalow mushrax Maxamed cali rajo laga sugaayi goof u tahay iyo 4 kale oo siyaad bare iyo ciro ba ku doorteen isaga!! Dr.Khadar-Libaaxley.
Sat 23 September 2017.
Ugu horeyn tacsi tiiraanyo leh waxa aan u dirayaa qoyskii qaraabadii, ehelkii, asxaabtii ,dhalintii, deegaankii iyo gobolkii uu ka baxay marxuunkii ku geeriyooday khamiistii 9/21/2017 magaalada Dilla ee degmada Baki ; illahay waxa aan ugu rajeynayaa qoyskii uu kabaxay in uu ugu badalo badal ka khayr badan marxuun kaasi oo dadka iyo dalkaba wada anfaca , marxuunkana illaahay janatu farduusa ha siiyo; amiin, amiintu waa aniga iyo dadweynah akhrinaya qormadan……………………
“’Hugun raaca shacabkiinan aan wax uga hooseyenin
Waa idiin hidiyo dhaqan cishaba mid aad hor yaacdaane
Oo halkee loo socdaa maleh haduu heegu kuu go’o
Haraad kama fursado geedigaan loo haloosiyin
Hadii aanad kabogan xalay dhankuu roobku ka hillaacay
Hanka iyo haloosiiska aan loo xidigin uu han-karaaraaye
Kee baa u dan ah hadhweynah kulmiye iyo millicda hoosiiska !!!.”’
Waa tuducyo kamid ah murtida abwaanka weyn ee c/raxman cumar cashuur iyo isku habeyntaydii.
Sababaha musharax maxamed cali u ayaan daranyahay rajada laga sugi karaana aad ugu hoosayso :
musharax maxamed caliga xisbiga wadani u sharaxan xilka madaxweyne xigeenka waa nin 93% u eeg oo aan laga garan oogada muuqa duleed marxuunkii rabi ha iskaga naxariistee kaligii taliye madaxweyne maxamed siyaad barihii somalia; ee soomaali oo dhami eeday , cidhib xumadiisii, raad kuleyl kiisii, hoodo iyo nasiib darnaantiisii illaa iyo maanta aan wali somalia iyo somaliland kob caleen iyo calan qiimaleh aaney midkoodna ka soo durdurin …….marka labarbar dhigo maxamed siyaad dhigiisii 1991 ka degay xukun ka ee ay ka mid yihiin ; xayle salaasihii ethoipia ee isku mar wada dhacay ee jabhaduhu xukun ka caydhiyeen; xataa barbar-dhiga ku dar kii eratariya; hoodo iyo ayaan xumida maxamed siyaadkii uu maxamed cali u eegyahay raad kulul keeda tusaale waxa kuugu filan ( in itoobiya iyo eratariya ba kufeen oo ay kaceen markiiba wixii somalia la isku odhan jiray darxumo iyo dac daro dul-hoganeyso illaamaanta; waa qayb kamid ah digo iyo danbaaburo xumadii maxamed siyaad ka uu musharax maxamed cali u suurad iyo sawrac eegyahay; tani reer awdalow iyo dhamaan reer somalilandow waa hillaadin iyo haloosiis aan ku sahamin karno inaan kheyr badan ka soo jeedin musharaxaasi ay isku eegyihiin maxamed siyaad bare.
Alleylehe xisbiga wadani gef iyo godobbey ku tahay in uu ummada reer somaliland hor keen masuul suurad iyo sawrac ba aad ugu eeg maxamed siyaad barihii gefka iyo godobta weyn soomaali mark laga yimaad reer somaliland ta ugu daran ka galey; oo arkaaba u daarmayso dareen waayo qadhaadh xasuustoodu u daarmayso oo maxamed siyaad geystay.
2ba arimoo oo siyaad ku doortay iyo 2ba uu ciro ku doortay :
U eekaashah maxamed cali uu maxamed siyaad ugu eekaa dhanka magaca kowaad iyo muuqa guud waa sababtii uu xilka safiirnimo in loo magacaabo calan sidka u ahey; dhanka kale musharax c/raxman ciro sababta uu isna u xushay masuulkan maxamed cali in uu ku xigeen u noqdo ayaa aheyd shaqada safiirnimo oo ay maxamed siyaad u wada hayeen iyo c/raxmaan ciro oo ka dhaweysanayey magaca ( mujaahid kii weynaa ee aasaaska u ah abuurankii SNM maxamed cali raxmatulaahi caleyhi ee burco duurey lagu dilay) .
2. rasmiyan illaa hada musharax maxamed cali iyo badi horweynta xisbigiisu 3 jeer ayey iskula soo haad baxeen dhankaa Borama ; 3 saddexda socdaal ba 3 dhalinyaro curdin ah ayaa ku qadar jabay oo ku dhintay; illaahay ayaa nolosha iyo geeridaba qadarteeda xukuma oo haya oo cidina dhaafi karimayso!! hayeeshee su’aal baa ka furan!! odhanaysa waa maxay dhimashadan ku gadaaman socdaalada xisbiga wadani gaar ahaan marka uu Borama u soo ruqaansado, ee ay shaqeynayso rooxaanta iyo gufaacooyinka musharax maxamed cali???! caqliga waxa la inoo siiyey dhan walba in aynu wax ka qiimayno !! xaqiiqda rabi baa og!! balse malahaygu wuxu odhanayaa ( waa signal casaan digniin ah, ama Lii , iska jira Reer Awdalow!! musharax maxamed cali iyo xisbigiisu waa halistiina iyo hadimadiina oo idiinma hooda iyo ayaan wanaagsana ) dhacdo kasta farax iyo murug ama xaaladaha caadiga ah ba dhamaan duruufaha ku gadaamani wey kula hadlayaan, gacan haadinayaan siro ay xambaar sanyihiina wey kuu sidaan ishaarooyin kood in aad akhrido ( code numbers kaasi iyo in aad baraad la’aan iska mushaaxdo waa wax kula yaal )).
3. musharax maxamed cali waa nin deegaan ahaan u dhashay degmada Awbare gobol ka faafan ee jigjiga ; waa masuul somaliland ka raadinaya xuquuq siyaasadeed oo laga mudanyahay ama laga xigo muwaadinnimadeed; xaq iyo xaqsoor toona maaha in nin kastaaba yidhaahdo musharax waad noqon kartaa !! waa in la hubiyaa deegaankiisa? La hubiyaa dalka iyo dadkaba waxa uu horey u soo gashaday ??!! maxamed cali xuquuqdiisa siyaasiga ah wey ka khaldantahay halka uu ka raadinaayo; xuquuqdiisa siyaasiga ah jigjiga ayey taalaa; somaliland iyo reer somaliland wax tacab ah hayaraato ha weynaatee horey uma soogashan; dadka reer awdal ah ee uu rabo in uu matalo waaba khalade mayaqaano waxa ay gudaan iyo waxa ay gooyaan toona, shalay buu qurbaha ka yimi isagoo cimrigiiba aan dhig iyo dheef toona la qaybsanin; markaasuu aayar suudh u soo xidhanayaa maanta oo uu idoorta leeyahay!! ma dadkuu garaadkooda caayayaa mise iyaguu ka arkay damanaanta anigu yaabay e’ ??? ina caliyow kursiga aad doonayso , ka kasareeya iyo xillal dhamaantood nooc ay yihiin ba Beelaha ku jira xuduuda gobolada Awdal iyo Salel ma’ah beel kaliya ee waa cid kasta oo gudaha wadanka taal ayaa xaqa iyo xuquuqda mansabyadaasi iska leh!! garo qofka aad tahay matihid reer Dilla adigu ( go to awbare then jigjiga la shir cabdi illey oo degmada awbare usoo dhici gobolnimo , hadaad sidaa sameyso kaligaa guul kuu noqon mayso xataa aniga iyo dhamaan reer awdal ayey u noqonaysaa wax ay ku faanaan !!) musharax maxamed caliyow reer awdal waxa aad ku leedahay xuquuqdii tolnimo , hoo iyo wax siin iyo naf-qaybsi balse kuma lihid xuquuq siyaasiya taasi xuduudaa ina kala xeeshay , xuquuqda siyaasiga ah waa sababta ay xuduuduhu macnaha u leeyihiin.
4. Reer Awdalow Nin taagii arinshay iyo aamus kala roon e’ oo runta ka’aan kehelin waxa u dhadhama been hataataca e’ hadii nasiibku saacido musharax maxamed cali oo uu kursiga fuulo ma’aha nin koob bigays ah u caaneynaya cid kasta oo reer Awdal ah sababtuna tahay; waxa la yidhi ( biyaha aan hortooda arkaayi dabadoodu waa dhooqo ) muunad tusaale hogaamintiisa waxa kugu cibro filan khibrad yarida iyo rido koobnaanta siyaasadiisa waa ninka gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Awdal ku aamini kariwaayey beelaha kale ee gobolka, waxa uu ku guneeyey nin kasoo jeeda degmada dilla oo beeshiisu dhamaantood yaalaan gudaha xuduuda somaliland; hayeeshee milgaha iyo xisaab siyaasadeedka marka la abla ableynayo waa looga wanaagsanaa ( ina maal gudoomiyaha gobolka ee xisbiga beelaha kale ayaa xaq u lahaa ) waayo bal in uu ka khibrad badanyahay, ka dareen iyo garasho fiicanyahay musharaxa dhigiisa ah mudane c/raxman c/lahi ismaciil saylici waxa daliil u ah; gudoomiyihii xisbiga kulmiye kamuu dhigin nin habar xuseen ah, waxa uu ka dhigay axmed ismaciil oo abreyn ah, dabeysha siyaasada ee had ba dhan kaaga imaneysa darteed ayaa gudoomiye axmed ismaciil tidhi dhig xilka oo u dhiibtay beelaha kale kulmiye ee reer Awdal ah, si lamid ah uu yeelay musharax c/raxman ciro ee uu ( gobolka saaxil ee uu ka soo geedo u dhiibay ciise muuse, togdheerna habar jeclo ) !!!.
+++ Kuma eeka intaas oo kaliya ee waxa waliba dheer ma’ahaan doono nin ku fikira ama la walwal noqda dadweynah reer awdal ee haybinaaya horumar isbedel lamahadiyo in ay gaadhaan amaba wax u soo kordhaan sababtuna tahay ( dadka iyo duruufahooda maba garanayo waxa ka sii daran sabab aanu ula dareen iyo dookh ba noqon karin oo ah la deegaan iyo dal midna maaha ).
Idinkaan idiin dhiibayaa qiimeynta hogaaminta musharax maxamed cali reer Awdalow e’ !! ma kaasaa koob bigeysa cadeynaya haduu si alleh ba ku yimaad kursiga ?? dadka kala garasho la’aanta iyo khibrada yarida wadanka ka haysata waxa uu ku darsaday hogaamin xumo aad u daciif ah.
Reer Awdalow fura indhihiina , kama muuqdo hadhac loo xishaa keyntan hamashta ah , dhalaan habaabista biyo lagu haraad baxo hamoodina, malinta ay timaad codkiina u meeldaya ,garta cida idin dhiqi karta !! garta cida kula deegaan iyo dareen ba ah, ninka kula deegaanka ah , kula duruuf ah ayaa garan kara dareemi kara xanuunkaaga iyo laxawgaaga, waxa ku dhibaya iyo waxa dawadaadu tahay, waxaad geydo iyo waxaad gudo;
Mudane maxamed cali aw cabdi marka aan leeyahay deegaan maaha idin ba waad ogtihii xataa ( Borama iyo Hargaisa toona midna guri kuma la ha, xataa ubad iyo oori midna dalka kama joogo; ma huraantiisii qurbaha ayuu soo dhigtay dalka intuu joogeyna hudheel iyo kiro ayuu ku jiray; kaliya waxa uu ku faraxsanyahay in uu si xisaab la’aan ah musharax iskaga noqday waliba dadku si xisaabtan la’aana iskaga sacab tumayaan ; reer awdalow idinkiyo garaadkii idinkiyo garashadiin ).
Gudoomiye muuse biixi laftiisu deegaan u malaha oo maroodi jeex, degmadiisu waa xarshin , xuquuqdiisa siyaasiga ah waxa ay taalaa jigjiga hayeeshee waxa uu cid walba kaga duwanyahay ( cimrigiisii ,naftiisii iyo maskaxdiisiiba waxa uu u hibeeyey bulshada reer somaliland) muu aheyn nin qurbaha suudh ka soo xidhay; c/raxmaan saylici inta ugu yar ee aan hada soo bandhigi karaayi , waa ninkii shirweynihii Borama 1993 ee beelaha reer somaliland u keenay kuraastii reer somaliland oo dhamiba shirkaasi ku fadhiday muuse biixina shirkaa laftiisa joogay!! c/raxman ciro iyo maxamed cali halkay joogey?? maxay se soo gashadeen u madan ay maanta codka ka doonayaan??
qof ahaan maxamed cali aw cabdi ma necbi dambina igama galin, waxa aan u hayaa niyad san, laab furan, soo dhaweyn diiran; inta kaliya ee aan ku haystaayi waa in aanu mudane maxamed cali aw cabdi aheyn shakhsigii ku haboona in uu matalo reer awdal sabankan maanta ah sababaha kor ku xusan dartood, kaliya ceelalyo iyo nasteexo u sida ummada ayaan ahay.